यसता छन् चोकरयुक्त आटा सेवन गर्नुको फाइदा
मैदा भन्दा चोक्रयुक्त आटा स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ । मैदालाई अस्वस्थ्यकर मानिन्छ । त्यसैले रोटी वा पराठा बनाउनको लागि आटा सर्वोत्तम हुन्छ । यो बजारमा सहजै पाइन्छ । यस्ता छन् चोकरयुक्त आटाको फाइदा ः
१. शोधकर्ताका अनुसार चोकरले रगतमा इम्यूनोग्लोब्यूलीन्सको मात्रा बढाउँछ, जो शरीरको....
बच्चालाई कसरी सिकाउने खाना खान ?
बच्चालाई हामी पढ्न सिकाउँछौ । लेख्न सिकाउँछौ । ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्छौ । तर, उनीहरुलाई कसरी व्यवहारिक रुपमा सक्षम र सभ्य बनाउने भन्ने कुरामा उति ख्याल गर्दैनौ । बच्चाले विद्यालयबाट मात्र सबै कुरा सिक्दैनन् । धेरैजसो व्यवहारिक कुरा त घरमै सिकाउनुपर्छ । जस्तो कि, कसरी....
बी एन्ड सी हस्पिटलले जोड्यो छिनेको खुट्टा
इटहरी । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालिन बी एन्ड सी हस्पिटलले मोटरसाइकल दुर्घटनामापरि छिनेको खुट्टा जोडेको छ ।
गत असार १२ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि कन्काई नगरपालिकाका ५३ वर्षीय गोपाल विष्टको छिनेको खुट्टा छिनेको थियो । विष्ट सवार मोटरसाइकलाई बसले ठक्कर दिँदा विष्टको खुट्टा छिन्न पुगेको....
यसरी पाउनुहोस् एकै रातमा डन्डिफोरबाट छुटकारा
व्यस्त जीवनशैलीको कारण पर्याप्त निन्द्रा नपुग्नाले र गलत खानपानको कारणले अनुहारमा पिम्पल्स अर्थात डन्डिफोर आउने गर्छ । यसले अनुहारको सुन्दरता बिगारी दिन्छ ।
डन्डीफोरको कारण धेरैले हैरानी खेप्नु परेको छ । यसलाई लुकाउनको लागि तपाई धेरै उपायहरु अपनाउनुहुन्छ । कहिले मेकअपले छोप्नुहुन्छ त कहिले....
सुन्दर छालाका लागि खानुहोस् आयोडिनयुक्त खाना
आयोडिनयुक्त खाना खानाले हाम्रो छाला सुन्दर बनाउँछ । त्यसैले सुन्दर छालाका लागि तल दिएका आयोडियुक्त खाना खान जरुरी छ ।
१. आयोडिनयुक्त नुन
ढिके नुनमा आयोडिनको मात्रा अत्यन्तै न्यून हुन्छ । त्यसैले आयोडिनयुक्त धूलो नुन सेवन गर्नुपर्छ ।
२. समुद्री तरकारी